Soo dejisan YouWave 3.30 – Vessoft
Soo dejisan YouWave
YouWave – software ah in ay ka soo dejisan iyo ordi codsiyada loogu talagalay nidaamka Android. YouWave ku jira mashiin Android dalwaddii oo la geliyo ka-qaybinta ah. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u ordaan codsiyada iyo ciyaaraha kala duwan oo ka disk degaanka ah ama u soo bixi internet ka. YouWave reproduces interface caadiga ah ee qalabka Android oo awood u la qabsato size shaashadda. Software ayaa sidoo kale kuu oggolaanayaa in aad kala soo bixi content ka Play Google iyo adeegyada kale. YouWave ku jira shaqo SD-kaarka, oo awood si ay u wadaagaan faylasha iyo fayl.
Codsiyada Download oo baxsad ah ee Android
Mashiinka dalwaddii Android
Isku dhex adeega Google ee Play
YouWave Software la xiriira:
العربية, English, Español, Português... XMind 3.6.51